Sina MVS China Vertical Axial flow and Mixed flow submersible submersible pump factory and manufacturing | Tongke
MVS Vertical Axial flow sy ny fantsom-pako azo alentika ao anaty rano mifangaro
Paompy mikoriana-axial-andiana seranana MVS seranana paompy mikorisa mitohy mikraoba AVS (Vertical Axial flow and Mixed flow submersible submersible pump) dia famokarana maoderina vita amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia maoderina vahiny. Ny fahafahan'ny paompy vaovao dia 20% lehibe kokoa noho ny taloha. Ny fahombiazany dia 3 ~ 5% ambony noho ny taloha.
Miaraka amin'ireo impellers azo ovaina dia manana tombony fahafaha-manao lehibe / loha malalaka / fahombiazana avo / fampiharana malalaka sy ny sisa.
A: kely ny ambaratonga paompy, tsotra ny fanamboarana ary nihena be ny fampiasam-bola, afaka mamonjy 30% ~ 40% ho an'ny vidin'ny trano izany.
B: Mora ny mametraka ny fikolokoloana sy fanamboarana ity paompy ity.
C: Fihenam-bidy mandritra ny androm-piainana lava.
Ny fitaovan'ny andiana AVS / MVS Axial flow sy ny fantsom-pandrefesana mikitroka mikitroka dia mety manary varahina vy metaly na vy vy.
AVS / MVS Ny fantsom-pifamoivoizana sy ny paompy ao anaty rano mikitroka dia mety amin'ny fametrahana cantilever elbow, fametrahana cantilever tsara ary fametrahana cantilever tsara.
ACCESSORIES ho an'ny paompy
3.Pre efa nalevina
4.Ny haavon'ny rano
5. tontonana fanaraha-maso
Previous: Long Shaft Vertical Turbine Sea Water Indostria City Flood Control Drainage Pump
savaivony DN350-1400 mm
fahafahana 900-12500 m3 / h
lohany hatramin'ny 20m
Suhu amin'ny ranoka hatramin'ny 50 ºC
Fametrahana pipa suction sy famoahana
1.Sipe Pipe: araky ny kisarisary ao amin'ilay bokikely. Ny lalina indrindra ao anaty paompy ao anaty rano dia tokony ho lehibe kokoa noho ilay datum amin'ny sary.
2.Décharge: flap valves sy fomba hafa.
3.Installation: Ny andian-tsarimihetsika MVS dia mety amin'ny fametrahana kélilever amin'ny kiho, fametrahana cantilever tsara ary fametrahana fametrahana cantilever tsara.
Submersible Motor (andiany MVS) Kilasy herinaratra: mihaona amin'ny GB755 ny fahombiazan'ny herinaratra
Kilasy fiarovana: IP68
Rafitra mangatsiaka: ICWO8A41
Karazana fametrahana voalohany: IM3013
TOSIKARATRA: hatramin'ny 355kw, 380V 600V 355KW, 380V 600V, 6kv, 10kv
Kilasy insulation: F
Hery naoty: 50Hz
Halavan'ny tariby: 10m
Ity karazana ity dia misy tombo-kase mekanika roa na telo. Ny tombo-kase voalohany, izay mifandray amin'ny rano, dia mazàna vita amin'ny silikone karbonika sy silikona karbonika. Ny faharoa sy fahatelo dia mazàna vita amin'ny silikone grafita sy karbonina.
Fiarovana amin'ny famoahana
Ny andian-tsarimihetsika MVS AVS dia manana sensor sensor fiarovana. Rehefa tafaporitsaka ny tranon-tsoliky ny motera na ny boaty tariby dia hanome fampitandremana na hijanona tsy hiasa ary hitazomana ny signal ny sensor.
Ny fiaramanidina môtô rendrika MVS dia manana mpiaro overheat. Rehefa mafana loatra dia omena fampitandremana na hijanona tsy mandeha intsony ny motera.
Raha mijery avy any ambony, dia mihodinkodina famantaranandro ny mpamindra.
MVS andian-tsarimihetsika axial-flow pump AVS andiam-paompy mikorisa mifangaro: ny famatsian-drano any an-tanàna, ny asa fanodinana, ny rafitra fanarian-drano maloto, ny tetikasa fanariana maloto.
Vahaolana maro tanjona:
• pumping mahazatra
• Fitaovana maloto sy semi solid
• Tsara manondro - fahaiza paompy banga avo
• Rindrambaiko maina
• fahamendrehana 24 ora
• Natao ho an'ny tontolo manodidina
TWP andian-dahatsoratra finday roa Diesel Engine Drive ...
MS Electrical Pressure multistage madio madio ...